Galmudug oo maanta hal askari Xitaa uusan uharin, Waa ciidan la aan maanta …. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Galmudug oo maanta hal askari Xitaa uusan uharin, Waa ciidan la aan maanta ….
Galmudug oo maanta hal askari Xitaa uusan uharin, Waa ciidan la aan maanta ….
Ciidamadaan ayaa ku dhawaaqay shaqa joojin ilaa iyo inta looga soo jawaabaayo, warar hoose oo PTFM heshay ayaa tilmaamaya in ciidamada shaqada joojiyay ey ka badan yihiin 570 askari iyo saraakiishoodaba.
Xariiro ay PTFM la sameysay saraakiisha ciidamada Booliska maamulka Galmudug ayaa waxay sheegeen in maqleen shaqa joojinta ciidamada Booliska Galmudug ay ku dhawaaqeen laakiin ay ka jawaabi doonaan saacadaha soo socda.